बच्चा नबसेर चिन्तित हुनुहुन्छ?अब चिन्ता मान्नु पर्दैन,डा. सबिना सिम्खडाको समाधान(भिडियोमा हेर्नुहोस) « गोर्खाली खबर डटकम
बच्चा नबसेर चिन्तित हुनुहुन्छ?अब चिन्ता मान्नु पर्दैन,डा. सबिना सिम्खडाको समाधान(भिडियोमा हेर्नुहोस)
पहिले नेपालका बिरामीहरु भारत जान्थे तर अहिले भार तबाट बाझोपनाको उपचार गर्न नेपाल आउने गरेको डा. सबिनाको अनुभव छ । उनको क्लिनिकमा पनि धेरै भार तीयहरु आएर सेवा लिएका छन् । हामीले उनी प्रजनन् बिशेषज्ञ डा. सबिना सिम्खडासंग बाँझोपना र प्रजननको बिषयमा कुराकानी गरेका छौं । हेरौ यो कुराकानी